Booliska India oo xiray Nin sameeyay beecin been abuur ah | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Booliska India oo xiray Nin sameeyay beecin been abuur ah
Booliska India oo xiray Nin sameeyay beecin been abuur ah
Booliiska dalka India ayaa xiray wiil 21 jir ah oo lala xiriirinayo barnaamij ku shaqeeyo taleefoonnada casriga ahi oo lagu faafiyay sawirrada in ka badan 100 gabdhood oo Muslimiin ah oo la sheegay in ay ” yihiin iib”.
Wiilkani ayaa ah arday jaamacad ka dhigta culuunta injineernimada, kaasi oo ka soo jeeda koonfurta magaalada Bangalore balse wali lama shaacin magaciisa rasmiga ahi.
Ilaa iyo haatan ma cadda dambiyada lagu soo oogay balse booliska ayaa BBC-da u sheegay in wiilkani lala xiriirinayo barnaamijkaasi lagu faafiyay sawirrada gabdhaha Muslimiinta ahi ee la sheegay in la iibinayo ay yihiin xaraash.
Barnaamijkaasi oo hadda laga saaray intarneedka ama la joojiyay isticmaalkiisa ayaa lagu faafiyay sawirrada dhawr gabdhood oo Muslimiin ah isla markaana ah saxafiyiin caan ah ama hawlwadeenno u dhaqdhaqaaqa arrimaha Muslimiinta, iyaga oo aan laga helan wax oggolaansho ah. Gabdhahaasi ayaa la sheegay in ay iib yihiin oo la xaraashayo, arrintaa oo qeyb ka ah naceybka ka dhanka ah dadyowga Muslimiinta ah ee dalkaasi India.
Booliska India oo xiray Nin sameeyay beecin been abuur ah was last modified: January 5th, 2022 by Admin
Dhageyso:–Barnaamijka Kulanka Warsan
Dowladda Soomaaliya oo soo bandhigtay askari xalay dad shacab ah ku dilay Muqdisho